Faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar maanta ka dhacay Hotel ku yaala Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada Hoose kaasoo lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamadii Col. Barre Hiiraale ee dhowaan dib loogu celiyey magaaladaas.
Afhayeenka Barre Hiiraale ee gobolada Jubbooyinka C/rashiid Macalin Gaas ayaa sheegay in weerarkaasi ay qaadeen ciidamada Maamulka Jubbaland, isla markaana ay Hotel ugu galeen Sarkaalka la dilay iyo kuwa la dhaawacay.
“Weerarkan waxaa lagu dilay Sarkaal lagu Magacaabo Yaasiin Nuur Gaas (Yaasiin Raadeer) sidoo kalena waxaa lagu dhaawacay labo Sarkaal oo kale oo Magacyadooda la kala yiraahdo Gacmadheere iyo Axmed” ayuu yiri afhayeenka.
C/rashiid ayaa sidoo kale tilmaamay in weerarka lagu qaaday saraakiishaan ay ku dhinteen labo askari oo ilaalo ahaan ula socday saraakiisha la weeraray.
Wararka qaar ayaa sheegaya in weerarkaas ay fuliyeen kooxo hubeysan oo madaxa soo qarsaday kuwaasoo markii dambe goobta si fudud uga baxsaday.